रिहनको मुद्दामा उच्च अदालतले मेडिकल काउन्सिल र ग्रान्डी अस्पताललाई बोलायो – PathivaraOnline
Home > समाचार > रिहनको मुद्दामा उच्च अदालतले मेडिकल काउन्सिल र ग्रान्डी अस्पताललाई बोलायो
रिहनको मुद्दामा उच्च अदालतले मेडिकल काउन्सिल र ग्रान्डी अस्पताललाई बोलायो
admin January 13, 2021 समाचार	0
काठमाडौ । अस्पतालको लापरवाहीका कारण आफ्नो भर्खर जन्मिएको छोराले भोगेको पीडा आमाबुवाका लागि पक्कै पनि निकै कठिन हुन्छ । रिहनका बुवा आमाले त्यो पीडा भोगी रहेका छन् । अस्पतालमा शल्यक्रिया मार्फत यो धर्तीमा आएका रिहनलाई के भएको हो भन्ने १० महिना सम्म थाहा नदिने ग्राण्डी अस्पताल विरुद्ध उनका बुवा सञ्जीव न्यौपाने र आमा एकता घिमिरेले अदालतमा दिएको मुद्दाका विषयमा प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिएको छ ।
छोरा रिहनको महिनौं उपचारमा लार्खौ रुपैया खर्च गरे तर त्यसबीचमा भोग्नुपरेको मानसिक पीडा त आफ्नो ठाउँमा छ । तर अहिले लापरवाही गर्ने अस्पताललाई कुनै कारवाही भएको छैन । केही एक वर्ष अघि रिहनको बारेमा मिडियामा समाचार सार्वजनिक भएको थियो । ग्राण्डी अस्पतालमा पटक पटक टाउकाको शल्यकृया गरिएका रिहनको स्वास्थ्यमा सुधार आएन । अस्पतालमा १० महिना सम्म उपचार गर्दा सम्म उनीहरुलाई छोरालाई के भएको हो भन्ने थाहा दिइएन ।
रिहनका बुवा आमाले अस्पताल वाहिरवाटै उनका स्वास्थ्य समस्याका बारेमा जानकारी पाएपछि सोधी खोजी गरेका थिए । ५ पटक शल्यकृया गरियो तर पनि उनी निको भएनन् । यस्तो लापरवाही गर्ने ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताललाई कुनै कारबाही नगरेको भन्दै मेडिकल काउन्सिल विरूद्ध सञ्जीव न्यौपाने र एकता घिमिरेले अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।
भारतीय मिडियामा दिएको अन्तरवार्ता पछि ओलीको प्रशंसा देखेर झस्किए डा भट्टराई !
दुर्घटनाकै कारण ७ वर्षीया अदीति संसारबाट सदाको लागि बिदा भइन् !
प्रचण्डलाई अमेरिकामा ‘नो इन्भेष्टिगेशन’ को सर्कुलर जारि – के हो ‘नो इन्भेष्टिगेशन’ ? जान्नुहोस्
जमिन खन्दाखन्दै मजदुरको एकाएक यसरी चम्कियो भाग्य !
श्रीमतीले सेल्फी बढी खिचेको र आफूलाई खान नदिएको भन्दै श्रीमानले गुहारे अदालत
मनिषा कोईराला र रेखा थापाको कार्यक्रममा ५ वर्षकी छोरी माथि भएको घटना बुवाले सुनाउँदा सबै स्तब्ध, रोकिएन कसैको आँशु (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौँ आउँदै गरेको बोलेरोले मोटरसाइकललाई ठ’क्कर दिँदा पानी पानी भन्दै घट’नास्थ’लमै ज्या’न गुमा’ए पुजनले!